Jubbaland oo farriin la xiriirta Duqeymaha Kenya ka fuliso Gedo u dirtay DFS | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Jubbaland oo farriin la xiriirta Duqeymaha Kenya ka fuliso Gedo u dirtay...
Jubbaland oo farriin la xiriirta Duqeymaha Kenya ka fuliso Gedo u dirtay DFS
Madaxweyne ku-xigeenka dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka golaha amniga Jubbaland, kaas oo bishiiba mar qabsooma isla markaana looga hadlo xaaladda Amniga guud ee deegaannada Jubbaland.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin Xoojinta la dagaallanka Al-Shabaab, Xoreynta Gobolka Jubbadda dhexe iyo deegaanada kale ee ka maqan gacanta Maamulka Jubbaland.
Sidoo kale inta uu socday kulanka oo ka dhacay Magaalada Kismaayo ayaa waxaa looga hadlay udiyaar garowga sugidda Amniga doorashooyinka dalka qaybta kaga aaddan Maamulkaas.
Sidoo kale shirka aad loogu cambareeyay duqaymihii kadhacay degaanka ceelcade iyo degaanno hostaga Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kuwaa oo ay ku wax yeeloobeen Shacabka halkaa kudhaqan iyo hantidooda.
Maamulka Jubbaland ayaa dowladda Federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay wax ka qabato duqeymaha diyaaradeed ee Kenya ka geystaan Gobolka Gedo, isla markaana lagu dilo dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
Kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda ee qaybta ka ah golaha Amniga, Saraakiisha kala duwan ee Ciidanka Jubbaland, kuwa Xooga Dalka iyo ciidamada qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM.
Maqaal horeRW Rooble oo Imaaraatka kala hadlay Gurmadka fatahaadaha Webiga
Maqaal XigaTaiwan oo balan qaad u sameeysay Somaliland, kadib doorashadii dhacday